Yonke into ofuna ukuyazi malunga ne-sunfish okanye i-mola mola | Ngeentlanzi
Kwiilwandlekazi sifumana izigidi zeentlobo. Ezinye zintle kakhulu, ezinye zaziwa ngcono kwaye ezinye zinqabile. Umntu uthatha iintlanzi esiza kuthetha ngazo namhlanje njengezona ntlobo zinqabileyo. Imalunga ne-sunfish.
Yeyona ntlanzi inzima emhlabeni kwaye inomzimba onomdla. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge-sunfish?
1 Iimpawu kunye neNkcazo
2 Indawo yokuhlala kunye nokuhanjiswa
6 Ungayitya i-sunfish?
Iimpawu kunye neNkcazo
I-sunfish yaziwa ngokuba yi ntlanzi ye mola mola. Yeyokulandelelana kwe- Iitetraodontiformes kunye nosapho UMolidae.
Olu hlobo luvela kulwandle olushushu kufutshane neikhweyitha kodwa lubonakala luxhaphaka kumazantsi eNgilani ngeenyanga zasehlotyeni, into abantu abaninzi abathi bubushushu behlabathi kunye notshintsho lwemozulu.
Ngamafutshane, umzimba we-sunfish yintloko enkulu enamaphiko. Unokulinganisa ukuya kuthi ga kwi-3,3 yeemitha ubude kunye nobunzima obukhulu be-2300 kilogram, nangona ihlala iphakathi kwama-247 nama-2000 kg.
Ulusu lwabo lutyibilike kwiluhlu lwee-mucus ezinombhalo ofana nesandpaper. Ityebile kwaye ayinazikali. Umbala wayo unokwahluka ngokweegrey ezahlukileyo ezingwevu, emdaka kunye nesilivere engwevu. Bahlala benesisu esimhlophe kwaye ezinye zazo zinokuba namabala amhlophe, kokubini kumacala okugqibela nangasemva.
Ukuba siyithelekisa nezinye iintlobo zentlanzi, I-sunfish ayinayo i-vertebrae kwaye ayinayo imithambo-luvo, amaphiko e-pelvic, kunye ne-blindder. Ngenxa yoko, le ntlanzi luhlobo ezinqabileyo kakhulu, ogama morphology yahlukile eqhelekileyo. Iimpiko zangasemva kunye nezempundu zinde kwaye i-pectoral enye ikufutshane ne-dorsal.
Elinye icandelo elinomdla kule ntlanzi kukuba endaweni yomsila wokugqibela unomsila owusebenzisayo ngokungathi ububambo lwarhoqo kwaye usukela ngasemva komva wengqolo ukuya kumda ongasemva we-anal fin. Umlomo wayo uzele ngamazinyo amancinci axutywe nokumila komlomo.
Ayaziwa ukuba ihlala ixesha elingakanani. Yintoni eyaziwayo kukuba ekuthinjweni zinokufikelela kwiminyaka eli-10. Oku kubonisa ukuba ixesha labo lokuphila endle mhlawumbi lifutshane, benikwa izoyikiso kunye nesidingo sokufuna ukutya. Ekuthinjweni banelungelo lokungabi namarhamncwa kwaye banokutya okuchanekileyo nokufanelekileyo, kunye nonyango lwezilwanyana ukuba kukho imfuneko.
Indawo yokuhlala kunye nokuhanjiswa
I-sunfish ifumaneka kwihlabathi lonke. Nangona kunjalo, iindawo apho abona bantu baninzi zikwiindawo ezipholileyo kunye neetropiki zoLwandlekazi lweAtlantic, uLwandlekazi lwePasifiki, uLwandlekazi lwaseIndiya kunye noLwandle lweMeditera.
Kwezi ndawo, indawo yazo yokuhlala iyahambelana neekorale ezinzulu kunye neebhedi ze-algae kulwandle oluvulekileyo.
I-sunfish iyodwa kwaye inendlela yokuziphatha enomdla; kwaye uyakuthanda ukuthambisa ilanga. Ukwenza oku, inyukela phezulu kwaye, ngale ndlela, iyakwazi ukulawula ubushushu bayo emva kokuqubha emanzini abandayo. Ishiya amaphiko ayo ebhencekile ukuze izikhulule kwizifunxi-gazi kwaye ngamanye amaxesha ixhume nomphezulu ngenjongo enye. Bayakwazi nokuzikhulula kwizifunxi-gazi ngoncedo lwenye i-sunfish.
Ukususela kwintlanzi enkulu kangaka ayinazo izilwanyana ezininzi, Ungadada ngokukhululekileyo kwaye ungakhathali elwandle ngaphandle kokucinga ukuba unokuba neentshaba kufutshane. Xa abantu abahlukeneyo befumana i-sunfish, ayinaburhalarhume kwaye ayinamabala. Ngaphezu, ngamanye amaxesha ezi ntlanzi, zihlaselwe kukufuna ukwazi, zilandela ezohlukeneyo. Ke inokuthi ithathelwe ingqalelo njengentlanzi ethambileyo kunye nenobuhlobo.
Ehlotyeni nasentwasahlobo, ezi ntlanzi zifudukela kwiindawo eziphakamileyo ukuya kufuna ukutya. Itya kakhulu ijellyfish kunye ne-zooplankton, nangona itya ii-crustaceans, i-salpa, i-algae kunye nemibungu yeentlanzi. Kuba oku kutya akunazondlo zininzi, I-sunfish kufuneka itye ukutya okuninzi ukuze ukwazi ukugcina ubungakanani bomzimba kunye nobunzima.
Nangona kungekho lwazi lungako malunga nokuzaliswa kwe-sunfish, abantu basetyhini bakholelwa ukuba bazala kuLwandle lweSargasso ngeenyanga zika-Agasti nango-Okthobha. Xa zizala, ziyakwazi dipozitha amaqanda angama-300 eemilimitha ezili-13. La maqanda achunyiswa akuba esemanzini.
Into eyaziwayo kukuba zezona ntlobo zichume kakhulu zomqolo. Xa amaqanda eqanduselwa, kuvela i-fry iinkwenkwezi ze-ninja, kuba iintlobo zayo zibonakala ngakumbi ngokubhekisele kuwo wonke umzimba.
I-Sunfish ayinazo izilwanyana ezininzi zendalo, ngenxa yolusu lwazo olungqingqwa ukuze lukwazi ukuthintela iintlobo zaselwandle ekubeni zizihlasele. Nangona kunjalo, bahlala behlaselwa ngookrebe, imikhomo yokubulala, kunye neengonyama zolwandle. Iintlanzi ezincinci zithanda ukuhlaselwa rhoqo yi-bluefin tuna. Njengoko bengenayo i-morphology yokubanceda bazikhusele, okanye naluphi na uhlobo lwetyhefu, i-sunfish iya kudada kuyo eyona ndawo inzulu apho ezinye iintlanzi zingoyiki ukubaleka.
Isoyikiso sokwenyani sithathwa ngabantu, ngengozi ngexesha lokuloba, nasekuzingeleni kwabo ngenjongo zokuthengisa ulusu lwabo.
I-Sunfish ayinakuthengiswa kwi-European Union, kuba kulityala ukubamba nokuthenga. Luhlobo olukhuselweyo. Nangona kunjalo, kumazwe aseAsia ayathanda IJapan, iChina neTaiwan zithathwa njengeyona nto ityiwayo. Oku kusetyenziswa kukhokelele ekubeni ezi ntlanzi zincitshiswe kakhulu kuyo yonke indawo yaseJapan nase China, kuba, ngaphandle kokubanjwa ngabom, ikwabanjwa ngengozi ngokuloba.
IUCN (uManyano lwaMazwe ngaMazwe loLondolozo lweNdalo) iyangqina ukuba amaphenyane okuloba aza kubamba iintlobo zezilwanyana ezivunyelweyo, ezinje ngefishfish, iphela sele ineminatha. ngaphezulu kwe-sunfish kuneentlobo ekujoliswe kuzo.
Le yintlanzi egcwele umdla ofuna ukuyibona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ilangafish
UFulanito Fulidríguez sitsho
Ukuphazamisa njani. Fuck iintlanzi ezingaqhelekanga.
Phendula uFulanito Fulidríguez